Amanoveli abukeka ngokufana asolisayo: 'IShutter Island' kanye 'nemigqa kaNkulunkulu egwegwile' | Izincwadi Zamanje
Amanoveli abukeka ngokufana asolisayo: 'IShutter Island' kanye ne 'God's Crooked Lines'
UMaria Ibanez | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 12/08/2015 14:24 | I-Novela
Indikimba engiletha ngayo namuhla inganikeza kahle uchungechunge lwe okuthunyelwe. Kubi kakhulu ukuthi awufundanga kangako, kakhulu, kangangoba uthole izincwadi ezibukeka ngokufana ngokusolisayo.
Kunama-movie Inzwa yesithupha y Abanye Banomqondo oyisisekelo wesakhiwo ocishe walandelwa, kuyinto ongayiqinisekisa ntambama. Kodwa-ke, ukuthola izincwadi ezimbili ezibukeka ngokufana kunzima kakhulu. Kodwa-ke, ngenxa yesinema, kwesinye isikhathi singakwazi ukukuqonda.
Lokhu kuyindaba yenoveli kaDennis Lehane Ukuvala Island, eyenziwe i-movie nguMartin Scorsese, futhi Imigqa kaNkulunkulu egwegwilenguTorcuato Luca de Tena.
Ngiyavuma ukuthi angikayifundi le ncwadi, kodwa ngiyibonile i-movie Ukuvala Island, edlala uLeonardo DiCaprio. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, ngigijima ngolunye ntambama ngoMashi emashalofini omtapo wolwazi kamasipala, ngathola isihloko esithi: Imigqa kaNkulunkulu egwegwile. Ngubani okwaziyo ukumelana nesiqu esinjalo?
Ukuze ungenzi lokhu kubanzi kakhulu iposi Ngizokutshela ukuthi yiziphi izinto engizitholile encwadini kaLuca de Tena ezingikhumbuze impikiswano eningi Ukuvala Island.
- Indaba iqala lapho abaseshi ababili bengena esikhungweni sabagula ngengqondo ukuxazulula imfihlakalo futhi bazenze abagulayo ngokwengqondo ukuhlanganisa.
- Kunodokotela abamlindile bobabili abalingiswa abakhulu, angaveli ngoba ehamba futhi obonakala engukhiye wokuxazulula lolu daba.
- Indawo lapho yenzeka khona iyindawo engayodwa, enamaphevili nezakhiwo abalingiswa abangafinyeleli kuzo.
- Kunezikhathi eziningi lapho ungabaza khona abalingiswa kanye nomsebenzi wabo weqiniso esibhedlela sabagula ngengqondo.
- Ukuphela, kuzo zombili izimo, kukushiya unomuzwa wokungabaza wokungabaza.
Zihlukile ngezindlela eziningi, kunjalo. Ngenkathi Ukuvala Island i-protagonist yindoda, uTeddy Daniels, futhi isethwe e-United States eminyakeni yama-40, Imigqa kaNkulunkulu egwegwile Iqhakambisa owesifazane, u-Alice Gould, futhi isethwe eSpain ngawo-70.
Umsebenzi kaLuca de Tena wakhishwa ngo-1979, eminyakeni eminingi ngaphambi kwencwadi kaDennis Lehane, eyashicilelwa ngo-2003.
Ngokungabikho kokufunda inoveli yaseMelika, ngingakuqinisekisa lokho Imigqa kaNkulunkulu egwegwile Luhambo oluya emsileni futhi, njengoba kusho umbhali ekunikezelweni kwencwadi, intela ekilasini lezokwelapha:
Imigqa kaNkulunkulu egwegwile, impela, isontekile kakhulu. Abesilisa nabesifazane abayisibonelo, abanesibindi futhi abanobuqhawe, bafuna ukubalungisa. Kwesinye isikhathi bayaphumelela. Ukubongwa ngokujulile ngomsebenzi wakhe ngesikhathi ngihlala ngokuzithandela esibhedlela sabagula ngengqondo kwanezela ekubongweni nasekuhlonipheni engihlale ngikuthola esikhungweni sezokwelapha. Ngakho-ke, nginikela la makhasi kodokotela, abahlengikazi, abanakekeli, abanakekeli, nabanye ochwepheshe abachitha izimpilo zabo emsebenzini omuhle futhi oqotho wamaphutha amabi kakhulu eMvelo.
Ngemuva kokwenza usesho kwaGoogle, ngikwazile ukuqinisekisa ukuthi bekungeyimi ngedwa oye wabona ukufana kwalezi zindaba. Futhi wena, uyazi izincwadi ezibhubha ngokusolisayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » izinhlobo » I-Novela » Amanoveli abukeka ngokufana asolisayo: 'IShutter Island' kanye ne 'God's Crooked Lines'
Abanye - okunye ukuphenduka kwesikulufa (henry james)
Total defiance - sizokukhumbula ngawe (philip k dick)
Kulahlekile - amabili ngemuva kwamabili (stephen king)
Iskena Esimnyama (uPhilip K Dick)
Yebo, noma yiliphi "igama elikhulu" lefilimu eqanjiwe lesayensi lithathwe ku-Asimov, George Orwell, Verne, K Dick njll. Njll. Nokuthi ababhali nabaqondisi bazi kahle kakhulu kepha bayakuthula ngoba bayazi ukuthi abantu abafundi. Ake sisebenzise ubuphukuphuku bomuntu futhi senze ukudla okwenziwe kabusha. ICinema ifunwa izincwadi. Inhlonipho encane yabadali bokuqala. Bayeke basho ukuthi bakopisha yiphi incwadi. Futhi babanikeza ama-Oscars!? Banikeze umbhali okunguyena obenombono!
Ngivumelana ngokuphelele nawe, Kf. Kwakuyizinsuku ezimbalwa ezedlule lapho ngathola khona ukuthi i-'Shutter Island 'yinoveli yango-2003 eyenziwa yiScorsese yenziwa ifilimu ngo-2010. Singakhuluma nangokuthi' Ukubulala iMockingbird 'noHarper Lee. Muva nje kuthelevishini singakhuluma ngo'Detective Wangempela 'noCarcosa nazo zonke izinganekwane, abalingiswa nezindawo umlobi wesikrini azithathe kwabanye ababhali.
Qaphela ukuthi umbhali we-'Shutter Island 'uphinde wabhala ukuthi' iMistyc River '(nayo ebingazi ukuthi isuselwa enoveleni) futhi ingumbhali wesikrini we-'The Wire'.
Engikucabangayo ukuthi ngabe uDennis Leahne, ngenhlanhla, wafunda 'imigqa kaNkulunkulu egwegwile' noma wabona ifilimu yango-1983, ngoba ukufana kuyabonakala impela.
Vele kuzofanele ufunde inoveli ukuze ubone ukuthi inokubaluleka okufana nokubhalwa kwemibhalo njengoLuca de Tena noma ingabe kuyisasasa lokudla impelasonto.
: n amacala weTotal Challenge ne-A scanner Darkly ukuthi asekelwe ngokusemthethweni kulezo zindaba zikaPhillip K. Dick. Ukumangalela abanye abenzi bamafilimu ngokukopela abakhokhe amalungelo okuzivumelanisa nenkolo futhi basayina isivumelwano nezindlalifa, ngaphezu kokufaka amagama abo kumakhredithi njengombhali womsebenzi ifilimu esekwe kuwo ukudlula amadolobha amathathu .
Ngingumfanekiso ovelayo. kusho
Beka ama-vibes amahle!
Phendula kimi ngisesithombeni esivelayo.
Ngiyavuma ngokuphelele, angikholwa neze ukuthi uDennis Lehane wabhala "Isiqhingi Shutter" ngaphandle kokufunda "Imigqa Ekhohlakele KaNkulunkulu"
Umphenyi kanye nomlingisi omkhulu wencwadi munye kuphela, u-Alice Gould. Abababili.
Ngifunda imigqa kaNkulunkulu egwegwile. Angikayifundi inoveli yaseShutter Island, kepha ngiyibonile ibhayisikobho. Angikapheli phakathi kwencwadi okwamanje, kodwa kukhona okwenzekile okungiholele ekutheni ngicabange ngeShutter Island futhi ngiye ngabheka ngokuzenzakalela ukubona ukuthi ngubani okopishe obani, ngoba kusobala ukuthi inoveli eyodwa ibingeke ibe khona ngaphandle kwenye futhi lesi siQhingi Shutter. Ngingahle ngibe nephutha ngokuphelele, kepha kusolisa ngokufanayo ukuthi ngibe ngumkhuhlane nje.
Kuyihlazo ukuthi sengivele ngasibona iShutter Island, ngoba nginomuzwa wokuthi imigqa kaNkulunkulu egobile ngeke ingimangaze njengoba kufanele.
Kufanele ukusho okuphambene nalokho ukuthi yikuphi, iShuter Island iyona engafana nemigqa ... ngenxa yobudala bomuntu ngamunye ...
I-'Hopscotch 'kaCortázar, phakathi kwezincwadi ezinzima kakhulu ukuzifunda